မောရစ်ကောလစ်ရဲ့ 'ဗမာပြည်က တရားခွင်များ' ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ဆရာစံဦးဆောင်တဲ့ လယ်သမားသူပုန်တွေဟာ ခေတ် ပညာမတတ် အရေးအဖတ် ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စား လောက်သာတတ်တဲ့သူတွေ ဆိုတော့ ဗြိတိသျှအစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာ လက်နက်ကိုင် သူပုန်ထတဲ့ တနည်းပဲ သိတယ်၊ ခေတ်ပညာတတ် လူတန်းစားတွေကတော့ လွတ် လပ်တဲ့အစိုးရ ပေါ်ထွန်းလာရေး လွှတ်တော်ကနေ Read more »
လယ်ယာမြေသိမ်းပိုက်မှုပြဿနာများရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ (အပိုင်း ၁)
နိဒါန်းဗမာပြည်လူဦးရေရဲ့ အများစု (လူဦးရေရဲ့ ၇၀%) ဟာ မဟာပထဝီမြေကြီးကို မဏ္ဍိုင်ပြုပြီး မိမိလုပ်အားနဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနေကြသူများဖြစ်တယ်။ ထိုသူတွေက မြေကြီးဟာ သူတို့ရဲ့အသက်၊ မြေကြီးဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဝ၊ မြေကြီးဟာ သူတို့ဘဝရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းအနာဂါတ်အဖြစ်
လူထု ဆိုတာ အချဉ် မဟုတ် (ကိုဘ)
ပြောရရင် ၁၉၇၀-၇၃ ကာလတွေဟာ မဆလ အတွက် ကံဇာတာ အတက်ဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ ရမယ်ထင်တယ်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ/မဆလ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရလည်း အထိုင်ကျလာပြီ၊ အနက်မှ အညို အညို မှ အဖြူ စတဲ့ နယ်မြေတည်ဆောက်ရေးတွေလည်း စလုပ်လာနိုင်ပြီ။ မြို့ကြီးတချို့မှာသာ မြေအောက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ် ရှိနေပေမယ့်လည်း နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အနေအထား Read more »
တချိန်တခါက ကျွန်ုပ်တို့ ပအိုဝ်းခေါင်းဆောင်များကို လွမ်းမိသည်
တချိန်တုန်းက ပအိုဝ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များဟု ဆိုရာတွင် ကမ္ဘာကျော်ပင်လုံစာချုပ် အခန်း ကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ သူ သထုံပေး ခေါ် ဆီဆိုင်မြို့စား စ၀်ခွန်ကြည်နှင့် ကိုလိုနီခေတ်ကာလ ဂျီစီဘီအေ အမတ်မှစ၍ ပအိုဝ်း-ကရင်ခေါင်း ဆောင်ကြီးအထိဖြစ်ခဲ့သော Read more »
သူတို့ခေါ်တော့ ဒုက္ခသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ တော်လှန်ရေးသမား (နိဂုံးပိုင်း)
ကျနော်တို့ ထောင်ထဲရောက်တော့ ဖတ်စရာဆိုလို့ အောင်သန့်မင်း(ဂိုင်စီ)ဆီက အဖုံးတွေပြုတ်ပြီး စာရွက်တွေ ကြေမွတွန့်ခေါက်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဂရမ်မာ စာအုပ်အဟောင်းတအုပ် ဖတ်ရတယ်။ စာအုပ်တအုပ်လုံး လွတ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တွေမှာ မြန်မာသီချင်းတွေ အများကြီး ရေးထားတယ်။ ပုံနှိပ်စာလုံးတွေ လွတ်နေတဲ့ အပေါ်ပိုင်းနဲ့
သူတို့ခေါ်တော့ ဒုက္ခသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ တော်လှန်ရေးသမား (၂၁) ပြူတင်းပေါက် မရှိ၊ တံခါး မရှိတဲ့ အဆောက်အဦကြီးတခု။ နံရံကြီးတွေနဲ့ တိုင်လုံးကြီးတွေက စကျင်ကျောက်တွေနဲ့ဆောက်ထားသလို ဖွေးဖွေးဖြူနေတယ်။ မှန်တွေနဲ့ အမိုးလုပ်ထားပြီး အလင်းရောင်က စူးစူးဝါးဝါး ရနေတယ်။ တနေရာမှာ တစုံတခုကို လူတွေ စုပြုံတိုးဝှေ့ကြည့်နေတယ်။ ကျနော်လည်း အဲဒီလူတွေကြားတိုးဝင်ပြီး အလယ်က
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အသံပေးကြပြီ
ဒီတလောအတွင်း ဗမာပြည်မှာ "သမတလုပ်ချင်တယ်" လို့ ပြောင်ထုတ်ပြောသံနှစ်သံ ကြားလိုက်ရတာဟာ တိုက်ဆိုင် လှတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ပြောတဲ့လူတွေကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွှေမန်း (သူတို့ပြောတဲ့အချိန်အလိုက် ရှေ့နောက် စဉ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်က တနေရာမှာ ပြောပြီးတာနဲ့ Read more »
ရွှေဘုန်းတော်တိုးပါလို့ ငွေမိုးတွေရွာဆိုလိုက်လို့ အရမ်း သာဓုမခေါ်လိုက်နဲ့အုံးဗျ။ မဟုတ်မဟတ်ကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ကောင်းချီးပေးမိလို့ အသာဓု.. နသာဓု.. မသာဓုတွေ ဖြစ်သွားမယ်။ ခုလေးတင်ကြည့်လိုက်ရတဲ့ နေပူတော်ကနေ တိုက် ရိုက်လွှင့်တဲ့ ဘီဘီစီရဲ့ စီးပွားရေးဖိုရမ် ထိုးဇာတ်ကလေးကိုကြည့်ပြီး ဖိုရမ်ပါသူပရိတ်သတ်တွေအများစုက လက်ရှိ Read more »
သမိုင်းတွေဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေ အချင်းချင်း သတ်ကြဖြတ်ကြ၊
အာဏာရသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်း လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် သူငယ်ချင်းတွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ကြတာတွေ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ နားမလည်ခဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ အချင်းချင်းတွေအပေါ်
ဒီလောက်ထိ လုပ်ခဲ့ကြတာလဲ လို့ … ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအသက် (၂၅) နှစ်ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့အပြီးမှာတော့ အရာအားလုံးကို သဘောပေါက်စပြုလာတယ်။"ငွေ၊ အာဏာ၊ အန္တရာယ်များသော ကစားပွဲများ" လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်စေတဲ့ လုံလောက်သော အကြောင်းအရာများဖြစ်တယ် တဲ့။
ဤဝတ္ထုတိုကလေးကို ရေးသားဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က ဖြစ်သည်။ ငါးနှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းကုန်ပြီ ပြောင်းကုန်ပြီလို့ ဆိုသော်လည်း တကယ်တန်းမှာတော့ အတွင်းကလီစာများကား မပြောင်းသေးပါ။ မျက်နှာဖြူစကားပုံ တခုအတိုင်း ပြောရပါက ဝိုင်ပုလင်းအသစ်ထဲသို့ ဝိုင်ပုလင်းအဟောင်းထဲမှ ဝိုင်အရက်ကို ပြောင်းထည့်ထားတာသာ ဖြစ် သည်။ လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေနဲ့ ကိုက်ညီနေသေးတာမို့ Read more »
ရွှေဘုန်းတော်တိုးပါလို့ ငွေမိုးတွေရွာဆိုလိုက်လို့ အရမ်း သာဓုမခေါ်လိုက်နဲ့အုံးဗျ။ မဟုတ်မဟတ်ကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ကောင်းချီးပေးမိလို့ အသာဓု.. နသာဓ...
ဒီတလောအတွင်း ဗမာပြည်မှာ "သမတလုပ်ချင်တယ်" လို့ ပြောင်ထုတ်ပြောသံနှစ်သံ ကြားလိုက်ရတာဟာ တိုက်ဆိုင် လှတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ပြောတဲ့လူတွေကေ...
သမိုင်းတွေဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ လွတ်လပ်ရေးအတွက် အတူတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေ အချင်းချင်း သတ်ကြဖြတ်ကြ၊ အာဏာရသွားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်း လု...
အကြမ်းဖက် လက်တဆုတ်စာ တွေက လစဉ်လိုလို် ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးနေတာ တကယ့်ကို အစီ အစဉ်ကျကျပါပဲ။ အရင်က နယ်စပ်အရပ်မျက်နှာ အသီးသီးက တိုင်းရင်းသား...
တချိန်တုန်းက ပအိုဝ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များဟု ဆိုရာတွင် ကမ္ဘာကျော်ပင်လုံစာချုပ် အခန်း ကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ သူ သထုံပေး ခေါ် ဆီဆိုင်မြို့စား စ၀်ခ...
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း မြင့်မားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ လူမှုဝန်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်း၊ စာတတ်မြော...
သူတို့ခေါ်တော့ ဒုက္ခသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ တော်လှန်ရေးသမား (၂ဝ)
အင်ဖားထောင်ထဲက ဘဝ “ပါလီ.. ပါလီ.. ပါလီ” နံနက် နေရောင်နဲ့အတူ စူးစူးဝါးဝါး အော်လိုက်တဲ့အသံကြောင့် အဆောင်အသီးသီးက အကျဉ်းသားတွေ ကမန်းကတန်း...
ပြောရရင် ၁၉၇၀-၇၃ ကာလတွေဟာ မဆလ အတွက် ကံဇာတာ အတက်ဆုံးအချိန်လို့ပြောလို့ ရမယ်ထင်တယ်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ/မဆလ အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရလည်း အထိုင်ကျလြာ...
ဤဝတ္ထုတိုကလေးကို ရေးသားဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က ဖြစ်သည်။ ငါးနှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းကုန်ပြီ ပြောင်းကုန်ပြီလို့ ဆိုသော်...
ကျနော်မမေ့နိုင်သော အဆောက်အဦများ (၂)
မတကသ ကပ်တဲကြီး တချိန်က မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ ရွှေပြည်အေး၊ အောင်မင်္ဂလာနဲ့ ရတနာပုံဆိုတဲ့ အမျိုးသားကျောင်းဆောင်များတည် ရှိတဲ့ လမ်းတိုအတိုင်းအရှေ့ဘက...
Copyright Naytthit Media . Simple template. Template images by 5ugarless. Powered by Blogger.